Danjirow Ina Ayaad Tahay? W/Q A. M. Yusuf Wayeel | Laashin iyo Hal-abuur
Danjirow Ina Ayaad Tahay? W/Q A. M. Yusuf Wayeel
Danjirow Ina Ayaad Tahay? — A. M. Yusuf Wayeel
Xuseen Aw-Faarax Dubbad: Hees
QABIIL, horta, hadmaad aniga tol ii noqon? Maxaads e rabi lahayd in aan adiga kuu ahaado: Ma Dagaalooge aan kuu naxariisan? Ma Dabadhilif ay gaalo ku qaraabto? Ma Baarlamaan kusheeg, 4.5 lagu soo xulo? Ma Barfasoor dhaandhaan ah? Ma Wasiirro xeebaha kaa dhaxalwareejiya? Ma wadaad Murtad ah? Ma Sheekh hoobiye kugu xasuuqa? Ma Qaxooti gurilaawe/ dallaawe ah? Ma Bulshada dhiigmiiradka Caalamka? Haddii aan anigu ahaan lahaa Danjireha ( afhayeenka ) Shacabka Soomaaliyeed, weydiimaha kore, dhammaantood, waxa aan kaga warcelin lahaa, “Maya!” Waryaa! haddee mar uun wax iga maqal. Waa ku kaas maanta na! Nayroobi ayaad ku dhex lunsan tahay: adiga oo marqaansan, adiga oo shalaboow fiiqsan, iyo adiga oo welibana jaahilnimo ay ku sii dheer tahay. Ilaahay, adiga, qabiilkayow, ha ii kaa soo hanuunsho uun. Walle, adiga oo fiiro yeesha maahee, lagama yaabo in aad ku hagaagtid barbarka ay kaa jirto Qibladii Islaamka; isla Kacbadii ina Diridaari Istallaa, Danjirehaygii Nayroobi, — misana ogaan karay, aqoonsan jiray, soo booqan jiray — uu abbaarteeda na u jeesan jiray. Adigu na, qarankaygii, dadkaygii, ayaad Muxammaddiyadii ba ka jahawareerin.
Wq A. M. Yusuf | wayeel@icloud.com
Faafin: Gole Wayeel: Axad, Agoosto 23, 2009
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraaga ku suntan